Afọ ole bụ May Pokemon? - Mmega
Isi > Mmega > Onye na-enye ọzụzụ nwere ike - ịza ajụjụ ndị a
Afọ ole bụ May Pokemon?
Bọchị Valentine bụ oge ịhụnanya na ụzọ kacha mma iji gosi ya karịa mmadụ abụọ na-eme ka a ga - asị na ha anaghị amasị ibe ha mgbe ha kwesịrị ịpụ apụ na ọ bụ ya mere m ji nata ọtụtụ okwu na akwụkwọ akụkọ m Lastromantic, nke m na-arụ ụka banyere nwa agbọghọ emelitere Ashton na mgbe ọ lechara ọtụtụ n'ime okwu ndị a, ọ dị ka onye kachasị Serena na-azọ ocheeze nke enyi Ash Misty Solet. Ka anyị kwuo banyere ha na usoro iwu anyị na Ash kwesịrị ịhọrọ n'etiti ndị ibe ya ekwenyeghị m, wee lelee 10 m kacha elu na Serena mgbe isiokwu a gasịrị, yabụ ka anyị gafere na nke ahụ. Mmadụ Bịa ka n'elu 10 ihe Ash na Misty kwesịrị ụbọchị nọmba 10 Ọ bụ na ọtụtụ ngosipụta site ọ bụla nke Ash si ekwusi okwu ike misty anọwo ya na ndị fọdụrụ n'ezinụlọ oge ewezuga Phuket Chew na Brock, ma ndị na-abụọ kpamkpam dị iche iche n'elu iri, onye ọ bụ ebe ahụ site na mbido, z na-adọta ya ma na-amanye ya ka ọ bụrụ onye nchịkwa a na-akwanyere ùgwù, ma ọ bụ naanị onye nchịkwa, mgbe ahụ, ọ hụrụ adịghị ike Ash ka ya na ya nọrọ site na mmalite ya na ọbụlagodi na-abịa n'azụ oge ndị na-esote bụ iji hụ na Mae abụghị ' t na-eme ihe ọ bụla na-atọ ọchị ma hapụkwa Togepi ha, Misty Returnback From All That Episode, laghachiri n'ọtụtụ akụkụ nke usoro Ọgbọ dị elu na ọbụlagodi inweta diamond na ya na Pearl na Usoro Ọchịchọ Kachasị Mma Ruo mgbe ha niile chọrọ ịpụ, mana ọ ga-enwerịrị ihe jikọrọ ya na Pokémon League ma ọ bụrụ na ị lelee ndekọ Ash ruo ugbu a, ọ ga-achọ enyemaka ma ọ bụrụ na ịnweghị ike imeri mmeri mgbe oge a gasịrị Ma eleghị anya ihe niile ị chọrọ bụ enyi nwanyị njikwa mgbatị nke nwere ike ijikọ gị na ndozi ihe nkwado ahụ.
Oge a ị ga-eme ihe, ọ chọrọ onye dị n'ime ka ọ dọpụta ihe a n'ihi na ị naghị abanye n'oge ọ bụla Nọmba asatọ I nweghị ike iguzo ikpere ya na nke izizi nke igwe kwụwara Ashbreak's Misty na ị ma ihe ọ na-eme, ọ bụ soro ya 273 ngosipụta ogologo oge ruo mgbe ọ na-enweta ihe ọhụrụ nke bụ nraranye oge ọ bụla nkume dị ọkụ kpebiri ime ihe ha nwere ike ọ gaghị eme na D nọ ebe ahụ iji tụọ ya ma dọrọ otu n'ime ha ntị, n'ihi ya ha anaghị 'adaghị na nsogbu ma kwụsị ịmụ na ọ na-eche banyere otu ike otu na nzuzo chọrọ ka onye ọ bụla nọ na mpụga ọnụ ọgụgụ ya nwee obi ụtọ, ọbụlagodi ị hụrụ etu ha si lekọta ibe ha anya? N'ime usoro a, ọ dị ka nne nke lekọtara ya, lekọta mkpa ya niile na mgbe oge ruru Togepi ka ọ gbanwee wee hapụ akụkụ ya, ị maara ihe o mere, hapụ ya dịka ezigbo nne na-aga, ọ nwere ike bụrụ Ash ma jide n'aka, ikekwe ọ bụkwa Togepi na. Ogologo oge m na-ekwu, ọ na-amalite site na ihu ọma wee ghọọ Togetic ruo na njedebe na Mei, mana nke ahụ abụghị ngosipụta nke obi ụtọ Togepi bụ n'ezie Lass ndị edemede dere n'ụzọ nke chioma, ọ bụ na nke ahụ adịghị mma Pokemon anime nọmba ndị edemede isii, ọ nwere ike ịbụ ngwugwu na Brock ebe Brock na-apụ ogologo oge, ma eleghị anya ụbọchị ahụ na Misty mechara kpọghachite ya, nke dị mma karịa ịpụ na otu n'ime ndị enyi ochie gị ma nwee nke ọzọ? Bịa n'oge na-adịghị anya ka ọ gwa ndị nọọsụ niile na ndị uwe ojii maka ụbọchị Valentine Andy nwere ike sie nri maka gị, anyị niile maara na anyị ekwesịghị ịnọ nso n'ọkụ, kedu ihe jikọrọ ya na iwe ọkụ ma ka ọ bụrụ ndị na-eme nri. na nso ezi broom a ise ugbu a amatala m isi ihe mere Ash na Mistys ejighi abuo n’ihi na Misty nwere ike ime ka umu nwoke ghara iwe iwe, mana nke a bu n’ihi na ha egosighi Ash puo n’egwu ole o ji hu ya n’anya n’ike ya ichefu ya nke mere na atụgharịa iwe ị hụrụ otú iwe ya bụ mgbe niile na onye hụrụ gị n'anya nke ukwuu ọtụtụ anọ Roses na-acha uhie uhie violets na-acha anụnụ anụnụ ntụ-abịa mgbe ị na-eme ihe ọ bụla, ọ ga-abụ naanị gị na Pikachu, doesn 't dara ihe ọjọọ na Atọ ọ zọpụtara ndụ ya, cheta mgbe ejiri ọkụ eletrik na Lugia wee tinye n'ime oche iwe iwe, gbapụrụ ma waba n'ime oke osimiri ma ọ bụ ihe ọ bụla mmiri ahụ kwesịrị ịbụ? Otu mmiri ahụ mmiri ahụ ụdị mmiri mmiri ahụ bụ Pokemon na-atụ egwu ịbanye na ọgwụ ahụ dị egwu wee mee ka ọ nwee nchekwa dịka ezigbo onye na-azụ ụdị mmiri ọ bụ - ị gaghị mma ịba mmiri n'ihe ọ bụla ọzọ n'ihi na Misty agaghị anọ ebe ahụ ịdọpụta. ihe ikwesiri ijide ohere a nke abụọ, ọ na-atụ ụjọ nke anụ ọhịa na-atụgharị uche na-atụ egwu nke anụ ọhịa ndị ga-anọ mgbe spinarak na-arịgo na enyo ahịhịa, ị ga-eji otu slippers ya n'otu akwa Akwụkwọ ma ọ bụ pokeball ebe ahụ, ikekwe i meghị otú ahụ. Nwetara ya mgbe ọ lekọtara gị na maka nchinchi niile nke ndụ gị nke mebiri ya dị ka ọ na-achọ ịnwụ ma ọ bụ na ị maara na ị na-enyere ya aka inyere ya aka ọ bụghị naanị maka Star u, ọ bụ ihe gbasara Star Youtube nọmba otu Miss Tias Uhr - nwụrụ ma ọ bụ ihe fọrọ nke nta ka ọ nwụọ mgbe ọ bụla na ị ga-anọnyere ya na nke a Mgbe ahụ enwere ihe omume na Haunter, ihe nkiri ahụ na Lochia nke m kwuru na ọbụna oge gbanwere na nkume, nke ahụ nwụrụ anwụ ka ọ na-enwetakwa na oge ọ bụla enwere m ikeiche, enwere m ebe ahụ, wụ anya mmiri ole na ole ma jụọ ya ka o teta, teta, bashwake, ọ bụghị nwoke dị egwu, teta, ọ bụ oge iji ọkụ gbaa ọkụ n'ihi na ị naghị 'amam ihe ị na-eme na-ekele gị maka ịlele ya niile bụ ihe na-atọ ụtọ ma enwere m obi ụtọ na m nwere ike ịkọrọ gị gị niile, na-ekele ọzọ ma na-ejide ruo oge ọzọ
Afọ ole ka Eme Emerald dị?
Ruby, Sapphire naEmerald
Naafọ10, ọ kwagara Littleroot Town na mpaghara Hoenn. Nna ya na-bụ Norman, The Petalburg Gym Onye Ndú.
Know maara ihe niile nke uzu na ndepụta. Di ka ndi ochichi. Ha na-ele m anya ha ma ọtụtụ ihe karịa gị karịa ka ị chere.
Tupu anyị emee ule ebe a ha ziri ezi ọ bụ ụjọ
Ya mere, taa anyị na-na-na-ọzọ. Iji hu ka I si mara m nke oma. Ma ma ha a ka na ele m; n'ihi na ejighi m n'aka.
Ya mere, anyị ga-eme ụfọdụ ajụjụ ajụjụ ndị a. Echere m na afọ gị ga-ada ka nzuzu. Ka m gwa gị na ndị a ziri ezi ma ọ bụ na-ezighi ezi.
Ka anyị bido n’ụzọ dị mfe, ànyị nwere ike ịkọ afọ ole ị ga-adị site na fim ndị ị hụrụ? Ok, nke ahụ yiri ka ọ dị mfe. Anyị ga-enyocha ihe nkiri niile. Ahụla m 21 Jump Street Aladdin, ejiri m n'aka na ahụrụ m ntakịrị American Pie avatar na ọdịnihu, ntakịrị nke Brokeback Mountain Bruce, Ataja Casablanca, nna m na-a alwaysa ntị mgbe Chicken Run bụ ihe nkiri mbụ.
Ahụtụla m na ihe nkiri na-enweghị atụ. Oge ọchịchịrị shitty ahụ na-amasị m nke Prada na-eyi. Emela m ihe ọchị, mana aka m na-amasị Edward Scissor.
Nke a bụ ezigbo enyemaka, echeghị m na m ahụla ọgụ Club Forrest Gump Freaky Friday, ihe nkiri a na-amasịkwa m, oyi kpọnwụrụ m chọrọ ịhụ ihe nkiri a mana enwebeghị m mmanya na-egbu, enweghị m hụrụ ụlọ akwụkwọ sekọndrị egwu ma ọ bụrụ na ị kwenyere ya ma ọ bụ. Ọ bụghị naanị na ụlọ na Washington ka m hụrụ Agụụ Egwuregwu Jurassic Park Kiefer nke Iwu Blonde 537, bụ ndị gbagara Matilda otu nde, pụtara Girls Miss Congeniality naanị oge 19, enweghị m akwụkwọ ndetu, ụda zuru oke, ma ọ bụ okwute. pulp akụkọ ifo hụrụ. Ja Stream jaShrekHmm ihe nkiri a maara nke ọma Ọ dị mma, ịnyịnya ibu.
Nwa ịnyịnya ibu Odi nma nwoke a mara m nke mbu ihe mbu ebe ihe gi bu obere? Mba, ahụghị m onwe m na-egwu egwu maka nwanne nwanyị na-ehi ụra na Seattle na-elekọta mmadụ. Oh Chukwu m, ọ bụ Mark Zuckerberg? Super Bad Titanic Toy Story TwilightWizard Probability Have hụla ihe nkiri ndị a niile na-aza ajụjụ n'okpuru ihe ị na-ahụbeghị, enweghị m ike ijide 25 Kedu ka nke ahụ si mee? Gini ka m gwara gi nke a na ị maara nke ahụ? Amaghị m ihe m ga-agwa gị ka ị bụrụ otu n’ime ndị na-etinye nnyapade na kamera ha dịka ọmụmaatụ mgbe ha anaghị eji ya.
I huru ochichi onye isi ojii nke oru? Mba, mba, anyị enweghị ike inwe nke ahụ. Aga m agwa gị. I na ele m.
inine maka dịghịzi usoro
Adịghị m nzuzu ị ga-achọta n’oge na-adịghị anya Gbaa mbọ hụ na emechiri ụzọ gị Gbaa mbọ hụ na windo mechiri emechi mgbe ọ na - agba windo na - emechi. Are bụ onye ikpe na ikuku. Ndị a trending oriri na ga maa gị afọ exactlyOkay, BuzzFeed is okayAvocado Toast ee m hụrụ n'anya ube oyibo tost, dịkwa mma, ọ ga-eme m a puku afọ, ọ dịghị ụzọ ị ga-esi maa m ezigbo afọ unyi soft serve.
Oh, enwebeghị m ya mere m ga-eji mee nnọpụiche. Achọrọ m ịnwale. Oh ọkụkọ ọkụ, ọkụkọ ọkụ Oh YUM, nwa.
Enwere m mmasị na pokeball na-ekpo ọkụ na ọkụkọ, ahụrụ m egwuregwu pokeball n'anya, mana ọ bụghị ihe kachasị amasị m n'ụwa, mana ọ dị ezigbo mma mgbe agụụ na-agụ m nke ukwuu, ee na nke ahụ bụ achicha achicha mara mma nke achicha mba nke ahụ bụ, ọ dị mma ka m ga-ewere obere ntaneti n'ebe ahụ, mana nke ahụ bụ nnukwu ọrịa shuga. Enwere ihe na-eme n’ezinụlọ m. Echeghị m na m nwere ike ịgba ọsọ ọsọ karịa Pizza Detroit.
Enwetụbeghị m nke a n'ihi na ọ nweghị nri gluten, mana ejiri m n'aka na ọ bụ achịcha kọlịflawa na-atọ ụtọ. Kedu ụdị ihe vegan bụ nke ahụ? Aga m adị ka yuck, ọ masịrị m kọlịflawa, mana dịka ibe anụ enweghị mm-hmm, bubi purple yam, Abụghị m nhọrọ mbụ m ma ọ bụ nhọrọ nke abụọ ma ọ bụ ọbụlagodi nke atọ, enwere ike dị ka okooko osisi nke anọ ma ọ bụ nke ise. udidi bụ ihe ọ na-emere m nke na anaghị m amasị ọtụtụ, ugbu a anyị na-ekwu okwu. Ọ mara ezigbo mma.
Ọ masịrị m tii green Snickerdoodle Hummus Anụla m banyere Ọ dị ka achịcha kuki emere site na chickpeas mana ọ dị mma. Eeh, ezie, ọ nweghị ụzọ ị ga-esi ama afọ ndụ m. Mba, ọ bụghị otu nde afọ site ugbu a, ị ga - aka mma ịchọpụta ihe ị ga - eme n’ihi na enwetara m ya.
O nwere ike ịbụ n’ihi na ekpuchiri m kamera kamera m. Gaghị ahụ m, nke mbụ bụ ihe ndabara. Oh nke a.
Nke ahụ bụ mmeghachi omume na-atọ ọchị na tweets ndị ahụ, anyị ga-abụkwa ndị ọgbọ gị na otu ị gafere ya. Ya mere, m na-ekpe ikpe tweets ma ị ga-eme ya. Gwa m afọ ole m dị, ọ dị mma, ị na-arịa ọrịa mmiri na-agba agba mgbe ọ bụla ị na-esi nza ole na ole nke pasta na mbido izu.
Um, friza ya maka mgbe ọzọ Blocklike na-echegharị DM Childish sad be no dịkwa mma, ọ masịrị m na ọ bụ akụkọ ọjọọ ọzọ na-atọ ọchị maka ndị na-alụbeghị di na nwunye Ọnụ ọgụgụ azụ n'ime oke osimiri adaala ihe fọrọ nke nta ka ọ bụrụ ọkara kemgbe 1970, akụkọ na-ekwu na pịgharịa na. Enweghị m mmasị na ndụ eco-maara nke a maka ụmụ nwoke na ụmụ nwanyị na-efe nkịta ịkụ azụ m ga-achọ inwe Ma eleghị anya, m bụ nwoke nwere mmasị nwoke n'etiti M elu na kwa onye nzuzu are mara mma, onye ọzọ na-azụ ahịa na-ahapụ nrọ ya. Hahahahaha.
Nke a bụ ihe ọchị, m ga-edegharị nke a ka m nweta ya site na akụkọ ọjọọ ahụ, mmadụ, tụfuo bọọlụ ya, chere ma ọ bụrụ nwa agbọghọ, ee ee, ee e, anyị na-ekwu maka bọọlụ juggling Ana m ezigara m ihe mgbu, nwere atụmatụ n'abalị a Mba, erubeghị. Enwere m onwe m kpamkpam ma dịkwa, dịkwa mma, anyị ga-enwekwa ezigbo abalị. Ihe ọ bụla ị na-eme, ihe ọ bụla na-agagharị.
Abụ m ezigbo onye na-agụ egwu, m na-anọ n’azụ na olu na-ekwukarị okwu m. Ọ bụ ọnwa siri ike, n'ezie. Ọ ga-amasị m ịnụ ụda Eleanor RigbyDog na uwe mgbokwasị na-akwalite ọrụ, mana anaghị eji ejiji anya, ihe niile m na-eme bụ ịgbagharị site na ọkacha mmasị.
Enwere m mmasị na ọkacha mmasị dịka tweets na ndị dị otú ahụ, mana ee, Nkwado Xbox. Ajụrụ m Delhi Sharma na GTA ọ bụrụ na ị ga - ahụ ma ọ dịkwa mma? Ọ yi a red uwe elu na m gbara ya na a rọketi launcher ngọngọ nke na-agbalị ịbụ na-akpa ọchị Na mberede pasted email kama m mbinye aka na m na ụjọ nke ihichapụ jisiri iziga ya oh nke ahụ bụ ihe ọjọọ. Ọ dị ka Fraịde 13 mgbe ị kụrụ gas wee gbaa mbọ jupụta ụgbọ ala ahụ ị kụrụ r1 ma ọ bụ l1 na m na-aga n'ihu na-eme ihe na-ezighi ezi.
Ọ bụ ya mere m ji eyi deodorant maka ụmụ nwoke. Kedu ihe ị na-ekwu banyere nkịta anyị na-enweghị mmekọahụ? Oh, ọ nọgidere na-awagharị. Bọchị ụfọdụ ị ka na-erughị ka m hà.
You're na-na ọnwa na ụbọchị ndị ọzọ na ị bụghị n'aka na PI ihe nke ahụ pụtara, ma ọ bụrụ na ị na-ewute anyị nwere ike ikwu banyere ya. Nke ahụ ọ dị ka achicha dị ka nri? Oh na-agagharị, enwere m anwụrụ na nwoke a ka ị gwa ya okwu, nke ahụ ọ bụ? Enweghị uche? Aga m egbochi gị ihe ikpeazụ, m ga-eti mkpu site na ọnwụ m, echetara m m Ọ dị mma, nke ahụ dị ka okwu MCR ma ọ bụ ihe dịka ị na-agagharị na ị nọ n'oge 20 gị ma ị gafere ihe ọ bụla. 're dị na mmalite You're bụ n'ihi nke a Twitter ọzọ ebe a na-agaghị ekwe ka onye ọ bụla mmiri ozuzo na gị Nme. Ọ dị mma maka gị, mana m dị afọ iri abụọ m.
Daalụ. O nwere ike ịbụ mmalite nke iri abụọ ma ọ bụ afọ iri abụọ. Aga m ewere oge iri abụọ.
Daalụ nke ukwuu. Echere m, ị nọrọ ezigbo nso, mana ị nọghị nso, hazie nri ụmụaka ga-eri, anyị ga-abụkwa ndị ọbịa n’afọ ndụ gị. Na na na, na ada ụda ekwe.
Kedu ka ị si amasị ịmalite ụbọchị? Kedu ihe hell bụ ihe nzuzo nke ike m? Horlicks, m karịrị gị, mana dị ka nna m enweghị ndị na-enweghị mgbakwụnye mgbe m bụ nwata, amaghị m ihe nke a bụ maka gịnị? Kedu ihe bụ Tiffin gị maka ezumike dị mkpirikpi? Ọ dị mma? Kedu ihe ọ bụ? Gịnị bụ Maggie oyi? Iberibe a bụ ParathaRoti Sabzi, m nọ na mba na-ezighi ezi, dịkwa mma Ugboro ole ka ị na-eji emojis ndị ahụ ma ị ga-eche afọ gị? oge niile maka na nke a dị ka elu elu m na-eji nne m na-enye m emoji a. N'ihi ya, ọ dị m ka m ga-achọ ịkpọghachite ya. N'ihi ya, ọ dị ka oge nke abụọ m na-eji moji n'ihi na m na-ezigara mama m ọtụtụ.
Odo, ekpela m ikpe, o si n'aka nne m. Ọ DỊ MMA. Achọrọ m ime ka obi dị gị mma oge niile, lee, anyị ga-aga, m ga-ewetara onwe m ihe egwu eggplant emoji ma ọ bụ ihe ọ bụla ka anyị wee nwee ike ịgbanwe ya n'ihi na anaghị m eji nke ahụ eme ihe, kedu mgbe ị na-eme m? Ọ bụghị, kama ọ dịka ndị m na-eji dị ka ndị na-ekele gị.
Are bụ enyi m, ee ee enyi, dị ka mgbe n'ihi na ọtụtụ oge. Enweghị m ike ịchọta ya, yabụ jiri emoji dị iche. Ugboro ole ka ị na-eme nke a ugbu a na mgbe ahụ? Ana m enye onye ahụ emoji ka o wee nwee mkpịsị aka ha n’ebe ahụ, chere ka ọ bụghị mkpịsị aka ukwu adịghị nsị Anaghị m eji poopu eme ọtụtụ mgbe m chọrọ iji nsị.
Ee anyị na-ekwu. Agaghị m eji ya ọzọ. Ọ dị ka nke a n'ime ụlọ emoji ma anaghị m anwale ịgafe peeji ole na ole nke emojis iji chọta nsị m meriri ọtụtụ oge.
nzọ ụkwụ nke ịgba ịnyịnya ígwè
Ahụrụ m gị Oh, nke ahụ bụ oge m niile mgbe Wurst kwuru na ya chọrọ ime ihe m na-akwadoghị. You'll ga-enweta ihu a ma ọ bụrụ na achọrọ m ịkwụsị mkparịta ụka Kama ịsị ee, ọ dị mma. Ee, ee, ee naanị ma ọ bụ naanị mgbe ị nwetara ntakịrị ka oh god.
O buru ibu, Achọrọ m itufu ihe ịrịba ama ndị ọjọọ oge niile Hmm hmm, kedụ ihe ị mere taa? You nye iwu ihe si Amazon? Ugboro ole ka m ji eji emoji nwụrụ anwụ nke m na-eji? Ejighi ya otu ahụ Okay, eleghị anya m jiri ya otu ugboro ma ọ bụ ugboro abụọ na 2017, ọ dị mma, ugboro ugboro n'ihi na nne m ziteere m m ga-ezighachi ya Ọ dị mma, anaghị m enwe enwe ahụ n'ihi na nke ahụ bụ nzuzu dị ka I peekaboo no bitch fireNaanị otu oge m na-ekwu maka ihe ọma m, ọ dị mma, anaghị m eji ekwensu na-acha odo odo dịka aka Barney ma ọ bụrụ na ị bia na-ahụ 666 na ọkpọiso ya Ee, agaghị m enwe nsogbu na nwoke a Oh BuzzFeedOkay, okay. Anaghị m eji nke a ihe niile dịka m kwesiri, mana enwere m ihere nke itinye Mgbe, ka anyị kwuo ntakịrị. Ugboro ole ka iji nke a? Ejirila m pen pen nke na-ese mbọ ugboro ole na ole yabụ ka anyị mee ihe ọ bụla ugboro ole m jiri ya, mba, asị m asị na obi mgbawa ahụ m na-amaghị na nke a bụ ezigbo emoji.
Emechaala m. Ọ naghị eru afọ iri na abụọ. Na-agwa m banyere nwatakịrị dị afọ iri na abụọ.
Oh ee ee, afọ niile afọ anaghị eji eggplant gịnị ka m mere iji ruo ihe a? Nke mbu, gini ka I chere? Okwu m dị n'okpuru BuzzFeed niile chukwu otu narị percentMy allergies na-egwu n'ihi na e nwere ụfọdụ ohia, gbadata ka m mara afọ ole ị dị, ọ bụrụ na ị karịrị afọ ise, pịa bọtịnụ ahụ ma denye aha na Wolfpack beiWell, ahụrụ m unu n'anya ukwuu. Daalụ maka ikiri, bye ụmụ okorobịa
calorie ole ka m kwesịrị ịgba n’izu
Ọ nwere ike ịmasị Brendan?
Meeama enen̄ede otụk miBrendan siọdịdị na-enweghị ọdịmma onwe ya na nke mara mma mgbe mbụ ọ zutere ya, ọ na-echekwadị kaọ bụ onye ọ nwere ike inye obi ya. N'ime oge Legacy nke Emerald Dragon, ọ rọrọ nrọ banyere yaOnyinyechina ya ọnụ, ma na-enyekarị ya nleta na-atụghị anya ya.
whatno, enwetara m Christmas carol, ụjọ na-atụ m, nke ahụ bụ ube, mkpụrụ vaịn na-arụ ọrụ ọfụma, ugbu a, agara m ebe a ị na-anwale itkelly dị ka isi isi mgbaka dị ka achọghị m mkpịsị aka abc gwa gloria abụghị apụl otu ụbọchị ga nye gị isi ọwụwa ma ọ bụrụ na ị kụrụ isi gị oge niile ihe ọ kwesịrị ịnwe ka m nwee ọrịa strok ịkwụsị ya kwesịrị inye gị isi ọwụwa ọ rụrụ ya nwere ike iji osisi coke ị nwere tabson ị chọghị m nwere ike iji batrị amaghi ihe kpatara nke a ga-eji buru ezigbo echiche m ga-eji harry potterwand kwa ubochi akpiri m nku maka coatkelly ana m atu egwu nke uzo m di njikere mgbe i bu cola mgbe m gwara gi nke ahụ bụ iko coke ikpeazụ m nwere, anyị ejirila Cola zuru oke, mepee ya, chekwaa ndị ọ cheụ, chekwaa ụwa m agaghị enwe obi abụọ ọzọ na ị rụ ọrụ nkeji ise, ụjọ na-atụ m maka ihe na-esote otu esi ewepu aka a oh m nwere ike iji nke a ajula oh o di ka aka gi bu onye na - eje ozi na mmiri mmiri, m tufuru gi, o di nma na i nwere m rue mgbe mmekpa ahu diri ya. a na-ata ahụhụ na echere m na m ga-anwa, achọghị m na ihe ga - eme mgbe m na - eyiri obere sọks, m na - anọrọ onwe m aka, ọ dị mma maka m, enwere m mmetụta na achọrọ m ịdọ m n'ụkwụ m taa, yabụ emere m Ejiri sọks dị ogologo na sọks m dị mkpụmkpụ, ọ dị mma, ejidere gị, ana m ezu gị ohi, amaghị m, yabụ wepụ sọks ahụ, ị ​​ga-eme ka onye ohi chere na nke a bụ ụkwụ gị ọzọ. , ka anyi kporo aka ndia wee banye obere aka ejiri obi uto ma ya anoghi na nwoke a kuru m aka o naghi ahu nke a ihe m na eme bu uzu nile achoro m onye obula ya ugbua, gini kpatara na ewetaghi m mmiri obula, enwetara m ọ dị mma na ọ hụghị medid? Nwoke m nwere ike ime ihe ọ bụla m chọrọ ebe a amaghị m ihe kpatara m ji agbapụ na bọọdụ mmiri wee wepụ ya na aka m wee laa n'ụlọ ekele gị Bob ị na-ese ụbọchị ọzọ enwere m ike ichere ịhụ ka m si ụmụaka na-eme ihe mgbe ha chọpụtara na m nwụrụ ebe a ọ naghị arụ ọrụ ọ dị mma m agbaji mkpịsị aka m ahụghị ya n'isiokwu mgbe ị mere ya mana anaghị m etinye ya n'ihu gị mmiri enweghị ihe ọ bụla mere ' echegbula chee echiche banyere ebe obi uto gi na aka site na ohere nke di egwu? Amaara m ma ọ bụrụ na m gbanwee ya nke ọma, achọrọ m ọtụtụ mmiri karịa, ọ dị mma na anyị na-abịarukwu nso na mgbu, mana ọ nwere ebe oh oh, ọ dị mma otu ụzọ ọ ga - esi arụ ọrụ bụ ma ọ bụrụ na nwoke ahụ jidere gị aka. mee ya ike na ụkwụ gị, ị na-ebu mkpụrụ vaịn gị na fanelly gị, m na-agbakwunye nkeji iri na ise na-ekele gị na ị na-eme nke a na ihe mgbochi, ihe m maara na afọ juru m, ekele nụ m ma ọ bụrụ na uwe ogologo ọkpa m trouzas ụka dị na shelf m kwesịrị ịdị nfe m nwere ike ịwụ elu nke ukwuu ị nwere ike ghara ikwenye m mana traụza ahụ dị mma ma ana m arapara ihe n'okpuru oku a na-akpọ maka enyemaka bụ m na-agbakwunye na isi iyi ahụ enwere ihe karịrị otu nsogbu di ebe a mana adighi m egwu egwu na uwe mwụda na-akọwa ya na enweghị m ike ime ya ụka taa kellyi ga-ehicha ya ọ dị njọ karịa ka m tụrụ anya na m na-arịa ọrịa nke ị na-afụ site na acd wa s bụ cd na na-arụkwa ọrụ na nbudata dijitalụ naanị CD m nwere ugbu a na m na-akpọ Countryclassics 90si na-eche ma ọ ka na-arụ ọrụ m cdis wil l ugbu a, kwuo na m na-akpọ okpokoro emebi, mbadamba ụtarị, enwere m nke ahụ na uwe ogologo ụka m n'ime kọbọd m, isi ihe bụ ịdutu ala, ị dịkwa njọ? ọ na-ewute m na ị maara ihe m na-eche nke ukwuu na m ga-aga n'ihu ma jiri aka m mee ka nkwonkwo ụkwụ m na-eche ka mmadụ chọta m wee taa ụta maka onye omempụ n'ebe ahụ ka anyị na-aga, ike agwụla m
Enwere Mee na Ash?
Cheta naAshnaMeebụ di na nwunye naHụnanyamgbe anyị hụrụ na aga na ngosipụta.Ashnnapụta naMeena Torchic, weghachite ntụkwasị obi dị n'etitiAshnaMee, na-enye ha ohere ịrụkọ ọrụ ọnụ iji tọhapụ Pikachu.AshnaMeerịọ ibe unu mgbaghara, ọgụ ahụ akwụsị.
Emerald ọ dị oke ọnụ?
Emeralddị ụkọ na mgbe karịadị oke ọnụkarịa dayamọnd
Abịa na obere nadị oke ọnụnkume dị oké ọnụ ahịa, ọtụtụ n'ime anyị na-eche ozugbo banyere diamonds, mana, n'eziokwu,emeraldnwere ihe karịrị oge 20 dị obere karịa diamonds ma, ya mere, na-enyekarị ọnụahịa dị elu.
Afọ ole ka Brendan na May dị?
Ebe n'etiti 13 site 16.Ọnwa Isii 28. 2016 Nọvemba
Kedu onye ash na-ahụ n'anya n'ezie?
Dị ka e kwuru ná mmalite nke isiokwu ahụ,Ashna-eweghachi mmetụta nanị maka Misty, onye ihe ya masịrị ya mgbe nile; Egosiputara nka site n’omume ya na otua oji agwa ndi ozo ndi ozo banyere ya.
Misty o sutonu ash?
MaAshnaMistynwee mmetụta ịhụnanya maka ibe ha mgbe niile. Fa w’adwene bu aniberesɛm a ɛte saa no ho. Mechie, n'ezie, ma ọ bụghị ihunanya. Omuma atu kacha mma nwere ike buru mgbeAshnwetara emumeisusu onunke abụọ nkiri naMistyyiri ekworo.Mar 14 2019
Gini mere emerald ji di oke onu ahia?
Emeraldbụnke kachasị ọnụberyl, n'ihi ụfọdụ ihe. Dị ka ọtụtụ nkume dị iche iche n'ebe ahụ, ọ ghaghị ịgbaso ụfọdụ atụmanya, na agba na nghọta bụ ihe kachasị mkpa ma a bịa n'ihe atụ a. Miri ahu di nduemeraldbụ ndị nwere nnukwu uru. Agba ọchịchịrị, elu ọnụahịa ahụ.23.03.2019
Ego ole bụ emerald 1 carat?
1 caratnke ọkwa dị alaemeraldnwere ike na-eri dị ka obere ka $ 200, mgbe1 caratnke nwere nnukwu ihe nwere ike iweta $ 18,000. Sịntetikemeralddịukwuudị ọnụ ala, na ọbụna ndị kasị elu àgwà na-efu gburugburu $ 350 maka1 carat.07.06.2021
Enwere onye na-enye ọzụzụ maka Ekwensu nwere ike ibe akwa 5?
Egwuregwu-na-enyere ndị nkuzi aka maka Ekwensu nwere ike ibe akwa 5. Onye na-enye ọzụzụ a nwere ike ọ gaghị arụ ọrụ na otu ụdị egwuregwu gị. Iji tọhapụ faịlụ a mgbe ebudatara, biko tinye okwuntughe ndị a: onye na-enye ọzụzụ. Maka ibutu faịlụ anyị na-akwado iji sọftụwia na - akwụghị ụgwọ - 7-Zip. Mepee akwụkwọ ahụ, gbaa onye na-azụ ya azụ, wee kpọọ egwuregwu ahụ.
Onye bụ onye nkuzi nkuzi volleyball nke Misty May Treanor?
May-Treanor so na ndị ọrụ nkuzi volleyball ụmụ nwanyị na Mahadum Irvine Valley bidoro na 2001, agbanyeghị na edeghị aha ya ọzọ dịka onye ọrụ. Onye isi IVC, Tom Pestolesi, bụ onye nkuzi volleyball nke ụlọ akwụkwọ sekọndrị.
Ọnye na-bụ Mee na Hoenn pokedex?
Ọ bụrụ na ahọpụtaghị May ka ọ bụrụ onye ọkpụkpọ, ọ na-enyere nna ya aka imecha Hoenn Pokédex wee bụrụ Pokémon Prọfesọ. Ọ bụkwa onye na-egwu egwuregwu na enyi. N'adịghị ka ndị ọzọ na-agba ọsọ (ma e wezụga nke Brendan mgbe ọ na-egwu egwu dị ka Mee), ọ kwụsịrị ịbụ onye na-enye ọzụzụ, na-eme ka ha bụrụ naanị ndị na-adịghị adị maka agha mgbe ha merisịrị Elite Four.